Barcelona oo heshiis la gashay laacibka hoggaaminaya gool-dhalinta Bundesliga | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Barcelona oo heshiis la gashay laacibka hoggaaminaya gool-dhalinta Bundesliga
Barcelona oo heshiis la gashay laacibka hoggaaminaya gool-dhalinta Bundesliga
Himilo FM –Sida laga soo xigtay The Guardian iyo BeIN Sports, xiddiga ugu goolasha badan Bundesliga iyo weeraryahanka Eintracht Frankfurt Luka Jovic ayaa heshiis la gaaray Barcelona.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona ayaan weli heshiis la gaarin labada koox ee Benfica iyo Frankfurt.
Da ‘yarka Eintracht Frankfurt Luka Jovic ayaa ah xilli ciyaareedkan laacibka ugu goolasha badan isaga oo hoggaanka u haya gooldhalinta Bundesliga isagoo leh 14 gool 15 kulan oo uu saftay, sidoo kale afar kulan ayuu kasoo muuqday kursiga keydka.
Waxa uu cashar u dhigay ciyaartoyda Robert Lewandowski, Timo Werner, Marco Reus iyo Paco Alcacer. Waxa uu haatan ku sugan yahay Eintracht Frankfurt isaga oo ammaah kaga maqan naadiga Benfica oo iyadu leh milkiyadiisa.
Luka Jovic waxaa soo dalbaday kooxo badan oo Yurub ah iyadoo Barcelona iyo Chelsea ay yihiin kuwa ugu caansan ee doonaya xiddigan. Si kastaba ha ahaatee, maalmo yar gudahood warar soo baxayay ayaa sheegaya in Real Madrid ay sidoo kale soo gashay tartanka 21 jirkan.
Dhammaan seddexdan kooxood ee xiiseynaya ayaa leh gool dhaliyaal. Inkastoo Chelsea ay lasoo saxiixatay Higuain, kaasi oo aan aheyn xal waara oo anfici kara kooxda galbeedka London.
Barcelona ayaa Sidoo kale heysata Luis Suarez halka Real Madrid iyaduna ay ku faanto Karim Benzema.
Previous: Arday ku dhaaranaya inaysan gali doonin guur uusan waalidka raali ka aheyn!
Next: 13 Febraayo- Maalinta caalamiga ee raadiyaha